Iindaba -Uhlalutyo lweNtengiso lweebhotile zeglasi
Iimpawu eziphambili ze Izikhongozeli zokupakisha zeglasizezi: ezingenayo ityhefu, ukungabi nasongo; Ukungafihli, okuhle, ukuthintela okuhle, ukungangeni moya, izinto ezityebileyo neziqhelekileyo, ngexabiso eliphantsi, kwaye zinokusetyenziswa ngokuphindaphindiweyo. Inezinto eziluncedo zokumelana nobushushu, ukuxhathisa uxinzelelo kunye nokucoca ukuxhathisa. Inokucoca inzalo kubushushu obuphezulu kwaye igcinwe kubushushu obuphantsi. Ngenxa yezibonelelo zayo ezininzi, iye yaba yinto ekhethiweyo yokupakisha ibhiya, iti yeziqhamo, ijusi yejuzi kunye nezinye iziselo. Iimveliso zeglasi zenziwe ngeglasi eyaphukileyo, isoda ash, i-nitrate yesodiyamu, i-barium carbonate, isanti ye-quartz kunye neendidi ezingaphezu kweshumi zezinto ezisetyenzisiweyo. Zenziwe ngokunyibilika kunye nokubumba ngo-1600 ℃.
Iibhotile zeglasi iimilo ezahlukeneyo ingaveliswa ngokungqinelana ngumngundo ezahlukeneyo, ikakhulu kubandakanya iibhotile ezahlukeneyo iwayini, iibhotile zesiselo, iibhotile pickle, iibhotile zobusi, iibhotile intloko, iibhotile zamanzi, iibhotile zesiselo carbonated, iibhotile zekofu, iikomityi zeti, 0.5kg / 2.5kg / 4kg Izimbiza zewayini, njl. Ibhotile yeglasi ingangeni kwaye iyabonakala, kwaye inokugcina imveliso ethe-ethe kakhulu kukufuma ixesha elide.
Ngenxa yenkqubo eyahlukeneyo yokuvelisa iglasi, phantse zonke iimveliso zeglasi ziya kuvelisa inani elithile leglasi eyaphukileyo kwinkqubo yemveliso kunye nokulungiswa. Iglasi yeflethi kwishishini lezinto zokwakha kulula ukuphinda lisetyenziswe kwakhona ngenxa yemveliso yalo enkulu kunye nemveliso enye. Ireyithi yokurisayikilisha yangoku nayo iphezulu kakhulu. Nangona kunjalo, iimveliso zeglasi kunye neemveliso zeglasi kwishishini lokukhanya zinemilo eyahlukeneyo kunye neziphumo eziphantsi, ke inkqubo yokurisayikilisha inzima kakhulu. Iglasi eyaphukileyo ityebile kukungcola okungeniswe kwinkqubo yokunyibilika kweglasi, ke inokuchaphazela ukusebenza kweglasi uqobo.